Dad rayid ah oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay Kismaayo |
Dad rayid ah oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay Kismaayo
Sideed qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay xaafadda Calanleey ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose, kuwaasi oo la gaarsiiyay cisbitaalka magaalada Kismaayo.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka Aadan Maxamed ayaa soo sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen shaqaale ka shaqeynayay dhismo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay, kaasi oo ahaa miinada dhulka lagu aaso, isagoo intaa ku daray in dadka dhaawacmay qaarkooda laga deyrinayo xaaladooda caafimaad.
Afhayeenka Maamulka KMG ah ee Jubba Cabdinaasir Seeraar Maax oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa falkaasi ku eedeeyay maleeshiyada Al-Shabaab, isagoo shacabka ka codsaday inay xoojiyaan taageerada ay siinayaan ciidamada, si looga hortago kooxaha nabad diidka ah ee dhibaateynaya bulshada.
Qarax xooggan oo nooca miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa gudaha magaalada Kismaayo lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Brundi ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ee Jubooyinka.
Qaraxan ayaa ka dhacay xaafadda shaqaalaha gaar ahaan waaxda V-afmadow, waxaana lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM, waxaana qaraxaasi uu sababay qasaarooyin soo gaaray dad rayid ah.
Illaa hadda inta la ogyahay sideed qof oo rayid ah ayay dhaawacyo halis ah kasoo gaareen, kuwaasoo isugu jira kuwo ku dhaawacmay firirkii ka dhashay qaraxa iyo qaar kale oo ay haleeshay rasaastii ay fureen ciidamadii qaraxa lala beegsaday.
Gaadiidkii uu qaraxa haleelay ayuu burbur kasoo gaaray qeybta danbe, waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray madaxweeyne kuxigeenka 1-aad Mudane C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, wasiirro ka tirsan maamulka Jubba iyo saraakiil ciidan.
Madaxweeyne kuxigeenka 1-aad iyo wafdigiisa ayaa warbixinno ka dhageeystay saraakiishii AMISOM ee halkaasi ku sugnayd, waxaana sidoo kale ay booqdeen isbitalka guud ee magaalada Kismaayo halkaasoo la dhigay dadkii ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxa.
Booqashada ka dib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka Jubba C/naasir Seeraar Maax, waxa uuna sheegay in qaraxani uu sababay dhaawac soo gaaray sideed qof oo rayid ah.
“Sideed qof ayaa ku dhaawacantay qaraxa, todobo waxa uu firir kasoo gaaray qaraxa, mid kalena waxa haleeshay rasaastii ay fureen ciidankii la weeraray,” ayuu yiri afhayeenka maamulka Jubba C/naasir Seeraar Maax.
Weerarkan ayaa kusoo beegmaya xilli ammaanka magaalada Kismaayo si weyn loo adkeeyay islamarkaana uu soconayo wejigii labaad ee shirweeynihii dib u heshiisiinta Jubooyinka.